को हुन सक्छ ? वराहक्षेत्रमा माओवादी केन्द्रको मेयरको उमेदवार - Koshi Post
Home/राजनीति/को हुन सक्छ ? वराहक्षेत्रमा माओवादी केन्द्रको मेयरको उमेदवार
Koshi Post March 22, 2022
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिए सँगै उमेदवारहरुको चर्चा शुरु भएको छ । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र ) का तर्फबाट मेयरको उमेदवारका लागी कमल बहादुर कटुवाल , नरेन्द्र बस्नेत ९भोला० , पुष्प ढुंगाना , राजन कटुवाल ,गणेश पाण्डे र अमित गौतमको नाम चर्चामा छ ।
चर्चामा रहेका कटुवाल २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा समेत मेयर पदमा लडिसकेका ब्यक्ति हुन । उनी हाल बराहक्षेत्र नगर कमिटीका अध्यक्ष समेत हुन । कटुवाल माओवादी केन्द्रमा पुरानो इतिहास बोकेका निडर र हक्की स्वभावका नेताको रुपमा परिचित छन् । भोला २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा सभासद पदका लागि चुनाव लडेका ब्यक्ति हुन् । हाल उनी प्रदेश १ को माओवादी केन्द्रका सदस्य हुन् ।
त्यस्तै पुष्प २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा धनकुटाबाट समानुपातिक तर्फबाट सभासदका उमेदवार हुन् । हाल उनी प्रदेश न। १ का सदस्य रहेका छन् । पुष्प बराहक्षेत्रमा अध्ययनसिल नेताका रूपमा चिनिन्छ्न । प्रकाशपुर घर भएका राजन बिगतमा माओवादी केन्द्रको क्षेत्रीय समितिको अध्यक्ष समेत भएका ब्यक्ती हुन ।
हाल उनी प्रदेश १ को सदस्य रहेका छन् । पाण्डे वराहक्षेत्रमा माओवादी केन्द्रको हक्कि स्वभावका नेताको रुपमा चिनिन्छन । उनी भर्खरै सम्पन्न पार्टीको अधिवेशनमा बराहक्षेत्रको अध्यक्ष पदमा कटुवाल संग चुनाव लडेका थिए । पाण्डे माओवादी केन्द्रमा लामो इतिहास बोकेका नेता हुन । त्यस्तै युवा नेताको रुपमा चिएका अमित बराहक्षेत्रको पार्टी सचीव हुन् । उनी पछिल्लो समय राजनीति र सामाजिक काममा निकै सक्रिय छन् । अहिले युवा प्रती जनताको आकर्षण बढ्दै गएको हुदा पार्टीले बिश्वास गरेर आफुलाइ अगाडि बढाए पछि नहट्ने धारणा अमितले व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् ।
बराहक्षेत्रमा अहिले माओवादी केन्द्रमा १२ स्य ८४ जना सक्रिय सदस्यता लिएका छन् । गत निर्वाचनमा ४ सय सक्रिय सदस्य रहदा मेयरका उमेदवार कमल बहादुर कटुवालले २ हजार ८ सय ५० मत प्राप्त गरेका थिए पहिलेको तुलनामा हाल पार्टी निकै राम्रो हुने माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउछन् । माओवादी केन्द्रले १ ,५ , १० र ११ नम्बर वडालाइ जित्न सकिने वडाको रुपमा लिएको छ ।
प्रचण्ड नेपाल पेरिसडाँडामा नेकपाको ‘अन्तिम बैठक’ बसेपछि माधव नेपाल पक्ष एमालेमा फर्कियो
कम्युनिष्ट सुनसरीका अग्रज नेता ओम कोइरालाको निधन
महेन्द्र क्याम्पसको जग्गा बचाउन भुमाफिया विरुद्ध जागरण जुलुस
कांग्रेसका पूर्व क्षेत्रिय सभापति धनकुटाका जेष्ठ कांग्रेस सदस्यको निधन